သက်ဝေ: ပန်းကလေး သုံးပွင့်အကြောင်း
Posted by သက်ဝေ at 2:28 PM
ဒေါင်းမင်း January 16, 2009 at 3:13 PM
အောင်သာငယ် January 16, 2009 at 3:16 PM
နံပတ် ၁ ကို သိတယ်ထင်တယ်... --- လေ...
နံပတ် ၂ တော့ မသိဘူး...
နံပတ် ၃ ကို လည်း သိသလိုပဲ မ--- မဟုတ်လား...း)
Welcome January 16, 2009 at 3:22 PM
အလျဉ်းသင့်ရင်ဖြင့် . . .
ThuHninSee January 16, 2009 at 3:29 PM
ပန်းပွင့်နံပါတ်သုံးကြီးကို သိသလိုပဲ။ အပြင်မှာ တွေ့လို့ကတော့ အတင်းလိုက်ခေါ်မှာပဲ။ ထွက်ပြေးရင် လက်ကို မလွှတ်တန်းလိုက်ဆွဲထားမှာ။ စကားမစပ်.. ပန်းပုံလေးတွေ လှတယ်နော်။
May Moe January 16, 2009 at 3:37 PM
No.1 - မပန် ၊
No.2 - မတန်ခူး ၊
No.3 - မမKOM ဟုတ်လားမသိ မှန်းကြည့်တာပါ
သက်ဝေ January 16, 2009 at 3:47 PM
ထင်တာတွေ မှန်ပုံရတယ်... အကိုက လူကဲခတ် တော်တာကိုး..။ အကို့ ကိုရော ဒီက သိနေတယ် လို့နဲနဲမှ မထင်ဖူးလား... ဟား.. ဟား..
သူတို့ ဘယ်သူတွေဆိုတာ ပြောပြဖို့ခဏတော့ စောင့်အုံးနော်... သူတို့ တွေ သက်ဝေ ဘယ်သူဆိုတာ အရင် သိကြစေချင်လို့ ပါ... ဟီးဟီး...
ဟုတ်တယ်.. တို့ ရောပဲ..
အကျယ်ကြီး အော်ခေါ်မယ်လို့ပြောထားပြီးသားလေ...
ပန်းလေးတွေက အချိန်မရတော့လို့အင်တာနက်က ရှာထားတာပါ.. လင့်ခ်ထည့်ဖို့ မေ့သွားတယ်
ဖြေးဖြေးပြောလေ ညီမရဲ့ ... ဘုရား.. ဘုရား...
tg.nwai January 16, 2009 at 3:56 PM
ပန်းကလေးတွေသွားကြည့်ရအောင် လင့်ခ်(link) လေးတော့ ဟင့်တ်(hint)အနေနဲ့ ပြောပြနော်..:)
အောင်သာငယ် January 16, 2009 at 4:45 PM
သက်ဝေကတော့ အကို့ကို သိပြီးသားမှန်း သိတယ်လေ အကို့ ညီမလေးနံမည်တောင် လှမ်းမေးဖူးခဲ့သေးတာပဲဟာ...
သက်ဝေကိုသာ ဘယ်သူမှန်း မသိတာ...း)း)
ဒါမဲ့ အရေးမကြီးပါဘူးလေ လမ်းတူလို့ လူချင်းတွေ့ရင် အကျယ်ကြီးအော်ပြီး လှမ်းခေါ်မှာပဲဆိုတာ သိပြီးသားမို့ပါ...း)
sin dan lar January 16, 2009 at 5:29 PM
နံပါတ် ၁ တော့ မပန်လို့ ထင်သား...။
myatnoe January 16, 2009 at 6:15 PM
sin dan lar January 16, 2009 at 6:59 PM
၂ က မတန်ခူးလား....။
ဇနိ January 16, 2009 at 7:45 PM
မေမိုး ထင်သလိုပဲ ကျနော်လည်း ထင်တယ်
sonata-cantata January 16, 2009 at 9:08 PM
ပထမဆုံး စတင်ရင်းနှီးခဲ့ရသော ဘလော့ဂ်ဂါ - လေနုအေး ပိုင်ရှင် တန်ခူး
မမKOM (a) ခင်ဦးမေ ဆိုတာ ဘလော့ နာမည်ကိုး ...
JulyDream January 16, 2009 at 9:44 PM
နောက်ဆုံးတစ်ယောက်ကိုတော့ အသေအချာ သိနေတယ်။ အမည် ၂ ခု စလုံးကိုပေါ့လေ။ မှန်းရင်တော့ လွဲတတ်ပါတယ်လေ။ အဟဲ...
တန်ခူး January 16, 2009 at 11:32 PM
အိုး…အို… မှန်းတဲ့သူတွေက တော်လှချည်လား…
သက်ဝေရေ… ထင်ရုံတင်မဟုတ်ဘူး… သက်ဝေက သူငယ်ချင်းလေးဆိုတာ သိကိုသိနေတာ…
ဘယ်သူမှ ပြောလို့ မဟုတ်ဘူး… စိတ်ထဲက အလိုလိုသိနေတာ…
အမြဲလို သပ်သပ်ရပ်ရပ်နဲ့ရေချိူးပြီးကာစလို ရှင်းသန့် နေတဲ့ ဆံပင်လှလှထူထူကြီးနဲ့ချစ်စရာ သက်ဝေနဲ့အေးချမ်းတည်ငြိမ်တဲ့စာလေးတွေက တကယ်ကို ခွဲမရအောင် တွဲနေတာပါ…
ကြည်အေးစာအုပ်လေးယူရင်းနဲ့မုန့် ကျွေးပါမယ် (လှတယ်ပြောလို့ … တကယ်က ၀ တာပါ)
ခုလို သက်ဝေရဲ့ ပန်းလေးတပွင့် ဖြစ်ခွင့်ရတာ ကျေးဇူးအရမ်းတင်ပါတယ်…
စကားမစပ်… မမKOM ကို ဘယ်သူလဲဆိုတာပြောပြနော်… ဖုန်းဆက်လိုက်မယ်… ပန် ဘယ်သူဆိုတာ တပါတည်း ရိပ်မိသွားပြီ…
nu-san January 17, 2009 at 12:48 AM
မသက်ဝေက ပဟေဠိအဖြေညှိနေပြီ.. မတန်ခူးကလည်း အဖြေ ပြောပြသွားတယ်ဆိုတော့ မှန်တာပေါ့နော်.. :P
ပန်းပွင့် ၁ နဲ့ ၂ က မပန်နဲ့ မတန်ခူးဆိုပြီး ဖတ်လိုက်တာနဲ့ သိသာတယ်.. ပန်းပွင့် ၃ ကိုတော့ သိပ်မသိဘူး... အဟိ.. အပေါ်က comment တွေ ဖတ်ပြီးတော့ မမ KOM ဆိုရင်ပျော်စရာကြီး.. အမရေ.. မမ KOM လက်ကို အတင်းဆွဲထား သိလား.. လုံးဝ မလွှတ်ပေးနဲ့ .. :D
Craton January 17, 2009 at 12:55 AM
အဲ.. ဆွေမျိုးတွေလာစုနေတယ်.. ကောင်း၏ ကလေးတွေ ချစ်ချစ်ခင်ခင်နေကြနော်..းP
Moe Cho Thinn January 17, 2009 at 2:28 AM
ပဟေဠိ အဖြေညှိပါလား။ တော်သေးတယ်၊ ရှေ့ကလူတွေ ဖြေသွားလို့.. ဒီက ခပ်တုံးတုံးရယ်။
ဖတ်ပြီး ကြည်နူးလိုက်တာ မမသက်ဝေ။ ကိုယ်သိတဲ့လူတွေချည်းပါလား။ ပန်း ၃ပွင့်ရော၊ ရေးတဲ့ လူရော အားလုံးကို ချစ်တယ်။
strike January 17, 2009 at 3:45 AM
Nu Thwe January 17, 2009 at 5:06 AM
၁ နဲ့ ၃ ကို မှန်းမိတယ်။ ၂ ကတော့ ကိုယ် စာဖတ်နည်းလို့ ဖြစ်မယ်။ မသိလိုက်ဘူး။
ပုံရိပ် January 17, 2009 at 9:52 AM
မဇနိ January 17, 2009 at 1:44 PM
နံပါတ် ၃ က ပုန်းနေပါတယ်ဗျို့။
မီယာ January 17, 2009 at 6:07 PM
စာတွေဖတ်ဖူးပြီး လူတွေပါ တွေ့ချင်လိုက်တာ...
pandora January 17, 2009 at 7:39 PM
ဒီလိုအဖြစ်မျိုး လောကမှာ ရှိသလား :)
(ပေါင်ချိန်ကားထဲက ဘုရင်လေသံဖြင့် မေးသည်။):P
sin dan lar January 17, 2009 at 10:05 PM
နံပါတ် ၃ ကို အစကတော့ အမှန်းရခက်ပါသည်။
ခုတော့ ဒီပို့စ်မှာ ကောမန့်လာမရေးပဲ ပျောက်ချက်သားကောင်းလှသော.. အများသံသယ၀င်နေသော မမကေအိုအမ်...
Kay January 17, 2009 at 10:38 PM
စလုံးက..ကြီးဒေါ်တွေ တဖြည်းဖြည်း ပေါ်ကုန်ပီ။း)
ပန်နီဆူလားမှာ အပတ်တိုင်း တွေ့ကြတယ်ထင်တယ်။
သက်ဝေ January 18, 2009 at 12:40 AM
သိင်္ဂီ... ခုလောက်ဆို သိရောပေါ့လေ...
ကိုအောင်သာငယ်... သက်ဝေ ဘယ်သူဆိုတာ နောက်တော့ ပြောပြပါ့မယ်...
စင်စင်... မမ ဘယ်ရောက်နေလဲ မသိဘူးနော်... လာလဲမလာဘူး...
မြတ်နိုး... သိနေတယ်လေ ပေါ့... တန်ခူးရေးခဲ့တဲ့ Comment ကို ဖတ်ကြည့်ပြီးပြီမို့ လား...
ကိုနိ... တစ်ယောက်ကျန်နေတယ်... သိလား..
မသီတာ... အကိုးအကားနဲ့ဖွသွားတယ်ပေါ့... လာမယ်.. မသီတာ ဆိုတဲ့ ပန်းပွင့်လေးအကြောင်း...
သက်ဝေ January 18, 2009 at 12:49 AM
တန်ခူးနဲ့ပန်ပန်...
Comment တွေအတွက် အချစ်တွေပိုတိုး...
ကိုယ်တို့ဘလော့ဂ်လောကသားတွေ ဘလော့ဂ်ကျောင်းခန်းထဲက သင်ခန်းစာတွေမှာ စာ ဘယ်လောက်ကြေကြသလဲ၊ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် ဘယ်လောက် နွေးထွေး ချစ်ခင်ကြသလဲ ဆိုတာ Comment တွေက သက်သေပြနေကြတယ်လို့မထင်မိဘူးလား...
နုစံ.. Craton... Strike...
နုသွဲ့ ... ပုံရိပ်... နိနိ... မီယာ...
လာဖတ်ကြတာ ကျေးဇူး အထူးတင်ပါ၏။
ချိုသင်း.. ချိုသင်းဆိုတဲ့ ပန်းကလေးအကြောင်း ဖတ်ချင်သေးလား... သိနေတယ်လေ...
ကေ.. ကေ့အကြောင်းလဲ ရေးလိုက်မှာနော်... ဟွန်း...
အောင်သာငယ် January 18, 2009 at 1:16 PM
ရေးစမ်းပါဗျာ... အားလုံး အကြောင်း...း)
စိုင်းခမ်းထွန်း January 19, 2009 at 2:35 PM
ပန်းကလေးတွေအကြောင်း ကောင်းတယ်လို့ လက်တို့ပေးလိုက်ပြီဗျို့
TZA January 21, 2009 at 12:16 AM
ကျနော်လည်း ဒီလူတွေပဲလို့ ထင်နေတယ်၊ ထင်နေပါတယ်။ (ခပ်တည်တည်ပဲ)
Ko Boyz May 3, 2009 at 2:47 PM
သူတို့ ထင်သလိုပဲ ကနဦး မဆွကတည်းက သိပြီးသား.. ငှဲလျောင်း... ငှဲလျောင်း...။
ဒီနေ့မှာ သေချာဖတ်ကြည့်တယ်။ ဟင်းဟင်း... ဘူလဲ ဆိုတာ သိနေသလိုလိုပဲ...။ ဟိဟိ
ဇွန်မိုးစက် September 15, 2010 at 2:53 PM
မဖတ်ရသေးတဲ့ ပို့စ်ဟောင်းတွေ လာဖတ်သွားတယ်နော်။း)
khin oo may July 17, 2013 at 3:50 PM
ဟင် တို့ကွန်မက်မရေးမိပါလား. ဖတ်တာတော့ခဏခဏလာဖတ်သား အဟိ
Richsmile July 21, 2013 at 4:20 PM
ဒါပေမဲ့ မသက်ဝေ ရဲ့ သူငယ်ချင်းတွေဖြစ်တာရယ်
စာဖတ်ဖို့ အချိန်နည်းလို့ စာမဖတ်အားပေမဲ့